တန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်သူတွေထပ်ပြီး အပါမခံနိုင်တော့တာကြောင့် အရေးကြုံလာတိုင်း သူတို့တွေနဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မတွေ့ကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး - Myanmarload
တန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်သူတွေထပ်ပြီး အပါမခံနိုင်တော့တာကြောင့် အရေးကြုံလာတိုင်း သူတို့တွေနဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မတွေ့ကြဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး
လွန်ခဲ့သော ၁ လ က 08:30 March 09, 2021
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ဖွေးဖွေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် ဝန်းရံအားပေးမှုတွေနဲ့ အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ရပ်တည်လာခဲ့သူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြေပြင်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ဝေမျှပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Photo Crd-Phway Phway’s Facebook Page
မနေ့ညကလည်း ဖွေးဖွေးရဲ့ Facebook Page တွင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်သူတွေထပ်ပြီး အပါမခံနိုင်တော့တာကြောင့် အရေးကြုံလာတိုင်း သူတို့တွေနဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မတွေ့ကြဖို့ တောင်းဆိုနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကလည်း " GEN Z ​ညီမ​လေး ​မောင်​လေးတို့
ရဲရဲ​တောက်သတ္တိ​တွေရှိတာ ကမ္ဘာက​ရော ​မဖွေးတို့ Gen Y ​တွေ ​ရော Gen X ​တွေအားလုံး​ကော မျက်ဝါးထင်ထင် ​တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ ...
အားလုံးရဲ့ ​ပေးဆပ်မှု​တွေ​​ကြောင့် နိုင်​တော့မှာအ​သေအချာပါ!!!
ဟိုဘက်ကနေ ဖြိုခွင်းပါတယ် အ​ကြောင်းပြပြီး ​သေ​စေတဲ့လက်နက်​တွေသုံး ပြည်သူ​တွေကိုအကြမ်းဖက် ​နေတာ​တောင် ဘာလက်နက်မှမပါဘဲ ရင်​ကော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြ, အချင်းချင်းကာကွယ်ကူညီ ခဲ့ကြတာ ​တွေ့ရ​တော့ ရင်ထဲနင့်​နေ​အောင်​လေးစားရပါတယ်...
But...တိုင်းပြည် အတွက် ဒီ​လောက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ် နဲ့ ဒီလိုသတ္တိခဲ ​လေး​တွေ..
Gen X, Y, Z ဘယ် သူ့ကို မှ ထပ်မဆုံးရှုံးပါရ​စေနဲ့​တော့...
​နောက်​နေ့ ဆန္ဒပြပါ။ ​ပြေးစရာရှိ အပီ​ပြန်ပြေး။
ကမ္ဘာကိုသိ​နေပြီးသား​ပေမယ့် ထပ်သိ​အောင်သာ Social Media က ထပ် ပြဖို့ Footage ရရင်ရပါပြီ!
တ​စ်နေကုန် အပြင်မှာ မ​နေပါနဲ့ ..!
သုသု ​ပြော သလို သူတို့ကိုပဲ ​နေလှန်းထားလိုက်ပါ
I Don't want to discourage you coz I Respect each and everyone of You out there! 💪✨🥲🙏🙏🙏
Only Pls do One thing for me if you can...
နှလုံးသား​ကော ရှက်​ကြော​ရော, ဆင်ခြင်တုံတရားပါ ​မွေးထဲက ပါမလာတဲ့ အဲ့လူတွေနဲ့ တတ်နိုင်ရင်ထိပ်တိုက်အနီးကပ် မ​တွေ့ကြပါနဲ့​​တော့.. . မတန်လို့!
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ​ဖွေးတို့ပြည်သူ တ​စ်ယောက်မှ ထပ်အပါမခံနိုင်​​တော့လို့...
နိုင်ကို နိုင်​တော့မှာ မို့ အ​ရေး​တော်ပုံ​အောင်​တော့မှာမို့ ပိုပါးနပ်​ပေးကြပါ...
ပါးပါးနပ်နပ် သတ္တိရှိရှိ ဆက်ရင်ဆိုင်မယ်!
ဒါ​တွေအားလုံးပြီးတော့မှ ဟိုဘက်ကို တူတူ အားရပါးရ ဟားချင်​သေးလို့ !
With Much Love & Respect to BRAVER GEN Z ," ဆိုပြီး ရေးသားထားတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
Page generated in 0.1518 seconds with5database query and6memcached query.